Musharax Jebiye oo si diiran loogu soo dhaweeyey degmada Galdogob[SAWIRRO/VIDEO] | SAHAN ONLINE
Musharax Jebiye oo si diiran loogu soo dhaweeyey degmada Galdogob[SAWIRRO/VIDEO]
GOLDOGOB-Murashaxa xilka Madaxweynaha Puntland ee doorashada 2019 Maxamuud Khaliif Xasan (Eng. Jebiye) oo ku guda jira socdaalkiisii gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Mudug ayaa maanta oo Jimce ah gaaray magaaladda Galdogob. Goob magaalada ka baxsan waxaa uga hortegey wefdiga Musharaxa qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaaada Galdogob kuwaas oo caleema qoyas ku soo dhaweeyey wefdiga musharaxa.
Maxamuud Khaliif ayaa markii uu soo gaarey goobtii soo dhaweynta ka soo degey gaarigiisi, waxaana uu mid mid u gacan qaadey shacabkii soo dhaweeyey intooda badan.
Qaar kamid ah shacabkii soo dhaweeyey uu codbaahiyaha kula hadley dadweynaha iyo wefdiga u yimid ayaa muujiyey taageerada ay u hayaan Musharax Maxamuud Khaliif oo ay ku tilmaameen qof daa’imy in uu ka qaybqaato arimaha dantu ugu jirto bulshada, sidaas darteed uu ku habboon yahay in uu dalka hoggaamiyo.
Maxamuud Khaliif Xassan Musharaxa Madaxweynaha Puntand ayaa uga mahad celiyey shacabka Galdogob soo dhaweynta diiran. Galdogob ayu ku tilmaamey in a tahay magaalo istaatiiji ah isku xiri karta dhaqaalaha gobolka iyo kan ka baxaya, sidaas darteed uu ka shaqeyn doono hormarkeeda.
Musharaxa ayaa joogaya maalmaha soo socd magaalada galodob ka hor inta aanu soo afmeerin safarkiisi gobolka Mudug una gudbin gobolka xiga.